लेख्न भुक्तान गर्नुहोस् छोटो कथा प्रकाशक
लेख्न भुक्तान गर्नुहोस्
स्ट्रिमिंग प्लेटफर्महरूको लागि अद्वितीय सामग्री सिर्जना गरेर पैसा कमाउनुहोस्। लेख लेख्नुहोस् र प्रत्येक दृश्यको लागि पैसा पाउनुहोस्। तपाईंको दैनिक जीवनबाट लेख र कथाहरू पोष्ट गर्न हाम्रो प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहोस्। हामी प्रतिलिपि लेखकहरूको लागि पर्खिरहेका छौं र सामग्रीका लागि भुक्तानी गरिरहेका छौं!
एक स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले शूल लेख, चित्र र भिडियोहरू साझा गर्छन्, स्ट्रिमहरू सुरू गर्दछन्, साथीहरूलाई भेट्छन् र च्याट गर्दछन्। हामी प्रतिभाशाली लेखकहरू खोजिरहेका छौं जुन उनीहरूको आफ्नै अनुपम सामग्री सिर्जना गर्न तयार छन्।
हामी तपाईंको प्रकाशनको प्रत्येक दृश्यको लागि भुक्तान गर्दछौं र प्रयोगकर्ताहरूलाई भुक्तान गर्ने पोष्टहरूको लागि अनुमति दिन्छौं। तपाईले हेर्नका लागि $ ०.०4 सम्म पुग्न सक्नुहुनेछ।
अनलाइन लेख्न पैसा कमाउनुहोस्
पैसा कमाउनको लागि सबै प्लेटफर्मको सम्भाव्यता प्रयोग गर्नुहोस्। सबै मोनेटाइजेशन सडकहरू तपाईका लागि खुला छन्: नि: शुल्क लेख पोष्ट गर्नुहोस् र दृश्यहरू मार्फत कमाउनुहोस् वा तपाईंको सामग्री प्रयोगकर्ताहरूका लागि भुक्तान गर्नुहोस्। तपाईं हाम्रो सम्बद्ध कार्यक्रम मार्फत निष्क्रिय आय पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
पढ्न भुक्तान हुनुहोस्
पोष्ट हेर्नको लागि भुक्तान। हामी प्रयोगकर्ताहरूका लागि सामग्री of० दृश्यको लागि तिर्दछौं।
छोटो कथा बुझाउँदै
कपिराइटरहरूलाई आमन्त्रित गर्नका लागि पुरस्कृत। हाम्रो प्लेटफर्ममा अन्य लेखकहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् र उनीहरूको आयबाट १०% इनाम पाउनुहोस्।
लेख्न को लागी भुक्तान गर्नुहोस्
सदस्यता मार्फत पाठ मुद्रीकरण। विशेष सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् र सदस्यता मार्फत उपलब्ध गराउनुहोस्। मासिक सदस्यता को मूल्य सेट गर्नुहोस्।
जहाँ पैसाको लागि छोटो कथाहरू बुझाउने
खोज इञ्जिन ट्राफिकको माध्यमबाट मुद्रीकरण। सम्बद्ध कार्यक्रममा शामिल हुनुहोस्, प्रयोगकर्ताहरूलाई वेबसाइटमा आमन्त्रित गर्नुहोस् र प्लेटफर्ममा उनीहरूको खरीदहरूबाट %०% पाउनुहोस्।
छोटो कथाहरू लेख्दै
विविध सामग्री स्वागत छ। अब हामी हास्य, खेलकुद, कम्प्युटर गेम, एस्पोर्ट्स, कोस्पे र एनिमे, केटीहरू, कुकिंग, चित्र र कमिकहरूको बारेमा पोस्टहरू सक्रिय रूपमा प्रचार गर्दैछौं।
छोटो कथा प्रकाशक
उच्च-गुणवत्ता पोष्टहरूले तपाईंलाई अधिक कमाउन मद्दत गर्दछ। एक आकर्षक तस्बिर वा भिडियो र आकर्षक, विस्तृत विवरणले अधिक विचारहरूलाई आकर्षित गर्दछ र लेखकको आय बढाउँदछ
पैसा निकाल्न सजिलो। न्यूनतम फिर्ता रकम १० डलर हो। भिसा वा मास्टरकार्ड, PayPal, Yoomoney, QIWI वालेट, Sepa वा Bitsafe खातामा पैसा निकाल्नुहोस् वा चलानी (भुक्तानी बिल) सिर्जना गर्नुहोस्।
यो धेरै राम्रो कुराको लागी सोच्नुहुन्छ?
हामीलाई अहिले जाँच गर्नुहोस् र आज लेख्न भुक्तान हुनुहोस्!